အိမ်ခြံမြေ ငှါးရန် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်
မဟာအောင်မြေ	| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
##ငှားမည်## ** ၂၅ သိန်း ** မဟာမြိုင် No.2534 RC ၃ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အနောက်ဘက်လှည့် ) ၃၅ လမ်းနှင့် သိပ္ပံ လမ်းကြား
လမ်း ၆၀ အတင် No.2399 RC ၂ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ ( အရှေ့ဘက်လှည့် ) လမ်း ၆၀ /၄၂ လမ်း ဝန်းကျင်
၃၅ သိန်း ** ၄၂လမ်း အတင် No. 2400 RC ၃ ထပ် ပေ ၆၀ - ၈၀ (မြောက်ဘက်လှည့် ) ၆၃ လမ်း /၆၆ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
**၂၅ သိန်း ** ၆၆ လမ်း အတင် No. 2401 RC ၂ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၂ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
** သိန်း ၂၀ ** ၆၆ လမ်း အတင် No. 2402 RC ၃ ထပ် ပေ ၂၀ - ၆၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၂ လမ်းကြား မဟာမြိုင် ( ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၁ လုံး/ အသစ်စက်စက်)
** ၂၅ သိန်း ** ၆၆ လမ်း အတင် No. 2402 RC ၃ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၂ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
၆၆ လမ်း အတင် No. 2404 RC ၃ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အနောက်ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၂ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
၄၁ လမ်း အတင် No. 2405 RC ၃ ထပ် ပေ ၂၀ - ၆၀ (မြောက်ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၃ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
** ၂၅ သိန်း ** ၆၆ လမ်း အတင် No. 2406 RC ၃ ထပ် ပေ ၄၀ - ၆၀ (အနောက်ဘက်လှည့် ) ၃၉ လမ်း / ၄၃ လမ်းကြား မဟာမြိုင်
၄၀ပေ × ၆၀ပေ ၊ စက်မှုဇုန်
450 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ) | စက်မှုဇုန်
၄၂ လမ်း အတင် No. 2410 ဂိုဒေါင် ပေ ၄၀ - ၆၀ / ၁၀ ကွက်တွဲ (အရှေ့ဘက်လှည့် ) လမ်း ၆၀ - ၆၂ လမ်းကြား မနော်ရမံ ကစားကွင်း အရှေ့ဘက် အသေးစိတ်သိလိုပါကဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
လူနေအထူထပ်ဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်သည့် မဟာအောင်မြေမြို့နယ်သည် မန္တလေးမြို့လယ်၏ တောင်ဖက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည် ။ မြို့နယ်၏ အနောက်ဖက်တွင် ဧရာဝတီမြစ် ၊ တောင်ဖက်တွင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မြောက်ဖက်တွင်ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်တို့ဝန်းရံလျက်ရှိသည် ။ မန္တလေးတက္ကသိုလ်နှင့် မန္တလေးစိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံတို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းအနေနဲ့ မန္တလေးမြို့တွင် အခြားမြို့နယ်များထက်စာလျင် ဈေးနှုန်းသင့်ပြီးနေထိုင်သွားလာရန် ကောင်းသောမြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည် ။